Kedu esi chebe akpa site na ọnwụ na izu ohi n'ọdụ ụgbọelu?
Ulo ulo Ntụrụndụ
Ọnwụ na izu ohi na ọdụ ụgbọ elu, ọ dị mwute na ọ na-emekarị . Nke a bụ ọnọdụ ọjọọ, ma onye ọ bụla nwere ike ịbịakwute ya, mana ihe a ga-eme iji gbochie nke a ime, anyị ga-achọpụta ugbu a.
Akpa, ị ga-azụta akpa ma ọ bụ akpa akwa nke ga-adị iche na onye ọ bụla, dịka ọmụmaatụ, ọdịdị pụrụ iche ma ọ bụ na-egbukepụ agba. Ya mere ị nwere ike ịhụ ngwa gị ngwa ngwa na belt ebu. Ee, ma ọ bụrụ na ọ furu efu, ọ ga-adị mfe ma dị mfe maka ngwaahịa iji kọwaa ya, n'ihi ya a ga-achọta ngwa ngwa.
Ọ bụrụ na akpa gị bụ agba gbara ọchịchịrị ma ghara iche na nke ọ bụla site n'aka ndị ọzọ, mgbe ahụ, a ga-eme ka ọ pụta ìhè, dịka ọmụmaatụ, na teepu redio ma ọ bụ ihe nkwụnye. Mana igodo isi ekwesighi ekwenye ekwenye, enweghi obi ojoo na agagh adi ya ma o gaghi efu mgbe ejiri ya.
Tupu ụgbọ elu ahụ, jide n'aka na ị na-ese foto nke akpa gị, ma ọ bụrụ na ezuru ya ma ọ bụ furu efu, ị nwere ike ịhapụ ndị ọrụ na ọdụ ụgbọ elu na-egosi otú ọ dị. Ya mere, ọchụchọ ahụ ga-adị irè karị, ị gaghị agbalịrị ịkọwa otú o si ele anya.
Tụkwasị na nke ahụ, ọ bara uru ịmepụta kaadị ndị dị na akpa gị na Russian na Bekee, ebe ị na-egosi aha na aha nna gị, adreesị na kọntaktị. Mgbe a chọtara akpa gị, a ga-ahụ ya ozugbo na onye ọ ga-ebute.
Ọ dịghị mkpa ka ị buru ibu ahụ na njedebe, jide n'aka na ị ga-eleba ma ị debere tiketi akpa maka ya. Lelee na obodo ahụ ị na-efe na-ede ya.
Egbula ka ị ghara ịhapụ otu mpempe akwụkwọ na-akpaghị aka, nke ị ga-etinye na tiketi ahụ. Ọ bụrụ na akpa ejiri gị, mgbe ahụ, coupon a ga-abara gị uru.
Ndị na-efekarị n'ụgbọelu anaghị ege ntị na mkpado akpa. Site n'aka ha, ị ghaghị ijide n'aka na ị ga-ekpochapụ ụgbọ elu ọ bụla, n'ihi na ndị ọrụ ọdụ ụgbọelu nwere ike izipu akpa gị gaa n'obodo ọzọ n'ihi eziokwu ahụ na a ga-enwe ọtụtụ aha. Ọ dị mfe ịmegharị ebe ịkwesịrị ịnyefe akpa gị. Ọzọkwa, ndị ọrụ anaghị enwe oge buru ibu iji chọọ maka nke a maka njem a.
Cheta na a ga-akwụrịrị anya nlezianya pụrụ iche maka ọdịnaya nke akpa akwa ahụ. Ejula ya na anya anya ka o wee nwee ike mechibidoro ya aka n'èzí. Ntuchi na zippers enweghi ike iguzogide ya, n'ihi ya, ọtụtụ n'ime ihe gị ga-ebili iche iche na teepu ebufe. Jide n'aka na ọ dịghị onye ga-eme ka ha laghachikwute gị.
Ejila uwe akpa ochie. Ọ bụrụ na o nweelarị onwe ya, frayed, emesịkwala akwa ụta, zụta ihe ọhụrụ. Mara na ị ga-etinye akwa gị na polyethylene, nke a ị nwere ike ime na ọdụ ụgbọ elu ọ bụla. Ya mere, ị ga-azọpụta ọ bụghị naanị akpaaka gị, mana ihe ga-adịwanye ọkụ.
Ejila ihe onwunwe na ego na akpa gị, were ihe niile soro gị n'ụgbọelu. Akpa aka gị nwere ike iru 5 kilogram, nke a ezuru iji ego, laptọọpụ, ekwentị na ihe ndị ọzọ bara uru. N'elu ụgbọelu ụfọdụ, ị nwere ike ikwupụta na ị nwere ihe dị oké ọnụ ahịa n'ebe ahụ mgbe ị na-atụfu akpa ahụ, mgbe ahụ ọ bụrụ na ị funahụ ya, a ga-enwekwu nkwa na ị ga-akwụ ụgwọ.
Ọ bụrụ na ị na-efega ebe ị na-aga na transplants, buru n'uche na ị nwere ike mkpa iburu akpa wee weghachite ya ọzọ. Ya mere, zụta tiketi na oge nke oge a, ka oge na-aga ime ya, nke a pụtara ọ dịkarịa ala awa atọ.
Ma, ọ bụrụ na akpa akwa gị adịghịzi aga, ma ị hụghị ha na teepu ndị na-ebufe ya, enwela obi nkoropụ wee daa ozugbo. Nke a na-eme ọtụtụ ndị mmadụ. Chee echiche banyere ihe ọma, n'ihi na naanị pasent 5 nke ndị mmadụ na-atụfu ibu ha ruo mgbe ebighị ebi. Akwụpụla ọdụ ụgbọ elu ruo mgbe ị gwụchara akwụkwọ niile banyere ọnwụ ahụ.
Ị nwere ike ịhazi mkpuchi n'ihu ụgbọ elu, mgbe ahụ, ị ​​ga-enweta ụgwọ na okpukpu abụọ: dịka iwu na sitere na ụgbọelu ahụ n'onwe ya ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ dị njọ, ọ bụrụ na ọ dị njọ, gaa na ngalaba furu efu ma chọta alaka ụlọ ọrụ Russia nke "Search". Ọ na-ewe ihe dị ka otu izu ịchọta ya, oge kachasị achọpụta bụ ụbọchị 21.
Kedu ka akpa na-ezu ohi?
Mgbe ị kwụsịrị ibu gị, ọ na-aga na usoro nhazi ngwa ngwa. Ya mere, izu ohi enweghị ike ime n'ụzọ ọ bụla, n'ihi na ngwà ndị a dị elu ọ dịghị onye nwere ike inweta. Mgbe a na-ebugharị akpa ahụ, a na-ezigara ya n'ọdụ ụgbọ mmiri, ma ndị ọrụ ụgbọ elu na-adọrọ ha gaa n'ụgbọelu.
Mpaghara ọ bụla, nke na-ebufe akpa ahụ, kwadebere ya na vidiyo vidiyo, ndị ọrụ mara banyere ya. Naanị mgbe mmadụ metụrụ akpa akwa mmadụ aka bụ ịbanye n'ụgbọelu. Mgbe ụgbọ elu ahụ bịarutere, n'ihu ọnụnọ nke ụgbọelu ahụ, a na-ebudata akpa ahụ n'ime gwongworo, mgbe ahụ, a kpọgara ha n'ọdụ ụgbọ elu ma bubata na teepu ahụ.
Ma ọ bụrụ na ihe niile ejiri nyocha onyunyo, olee onye na-ezu ohi? Ezuru ohi na-eme onwe ha. Mgbe ụgbọelu ahụ na-efe, ha na-emeghe akpa ha ma chọọ ihe dị oke ọnụ. Ya mere, ha nwere oge iji preplant ụgbọelu iji wepụ ihe niile akaebe. Karịsịa mgbe ọ na-abịa n'ọdụ ụgbọ elu ndị si mba ọzọ. Ma ọ bụrụ na onye ohi ezuo ihe, mgbe ụgbọ elu ahụ nọ n'ọdụ ụgbọelu, mgbe ahụ, a ga - ejide ya na mmadụ abụọ.
Nnyocha onyunyo ebe a bụ n'efu, n'ihi na onye ahụ nwere ahụmahụ nwere nanị 6 sekọnd iji mezuo mpụ dị otú ahụ.
Kedu ihe m nwere ike ime iji gbochie ndị ohi gị ịdaba na akpa ahụ?
N'ọnọdụ ọ bụla, ahapụla ihe dị oké ọnụ ahịa gị n'akpa uwe gị, ọ dịghị ọla ọla na ngwá electronic. Echela na ọ bụrụ na ị nwere laptọọpụ ochie na akpa gị, a gaghị ezuru ya - kwere m, zuo ohi.
Ọ bụrụ na ị ka nwere ihe ndị bara uru, mgbe ahụ tupu ụgbọ elu ahụ emepụta ihe ndekọ nke ihe ndị a, ka i wee nwee ike gosi na ị nwere ihe ezuru. Ọchịchọ maka nke a ga-eme ọtụtụ nhịahụ na oge.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji chebe akpa gị site n'aka ndị na-eme ihe ọjọọ, jide n'aka na ị ga-ebu ya n'ime polyethylene. Ya mere, ị ga-azọpụta ya ọ bụghị nanị site na mmetọ, kama ọ na-ewetara ndị ohi ohi. Ngwongwu dị otú a ga-eri gị 200 rubles, mana kwadebe maka eziokwu ahụ na ọdụ ụgbọelu ụfọdụ, mgbe ejiri redio na-enyocha ha, ha nwere ike ịrịọ ka imepe ya.
Ọ bụrụ na ezuru akpa niile, kpọtụrụ ndị uweojii ozugbo. Na ngwa ahụ, biko dee: ole ọnụọgụ ụgbọ elu, ole ndị kwụsịrị ma bịarute, ọ bụ ihe na-achọsi ike na ị nwere ndị akaebe nwere ike ikwenye na ị tinyela ihe ma ọ bụ ihe ọzọ n'ime akpa ahụ. Tinye ihe nnata akpa na ozi. Ọ bụrụ na ị jisiri ike hụ ihe ị ga-eme, ị ghaghị ịnye akwụkwọ na-egosi na amalitela ikpe ikpe.
Paradaịs maka ndị na-azụ ahịa: atụmatụ ụlọ ahịa na Itali
Mgbe ọdịda ezumike na 2015
Kedu ka esi gbanwee gaa n'ahịa azụmahịa n'enweghị ụgwọ ọzọ?
Njem na Heaven: Ihe nzuzo nke Zanzibar
Isi ihe ntanetị nke spa
Tango bụ ịgba egwú nke agụụ na ịhụnanya
Kedu otu esi emefu izu ụka ma ọ bụrụ na ọ dịghị ọkara ọzọ
Ihe niile banyere oke na otu esi esi ya
Ihe omume mgbagwoju anya maka mgbanwe na oke nha
Chemical akpụkpọ na-ere ọkụ n'ime nwatakịrị
Nri na pawuda
Primrose n'ogige - aro maka na-eto eto
Obere salad radish
Peach agba n'ime ime
Mgbagwoju ngwugwu Pilates
Ugboro oku maka afọ nke agu maka ụmụ agbọghọ
Acupuncture: Nnukwu ọnwụ ọnwụ
Ọhụrụ anya na ịwa ahụ
Anyị na-ahazi otu nnọkọ n'ụlọ: usoro nke otu
Ihe ịrịba ama nke zodiac, nke ga-enwe obi ụtọ na February 2018
Turkey fillet na mmiri ara ehi
Mma nwoke na nwanyị n'oge dị iche iche
Courgettes na anụ